/ iimveliso / Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones / I-Levonorgestrel powder
Akukho kalo SKU: 797-63-7. iindidi: Ukusetyenziswa kwabasetyhini, Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones
Ifomula yeMolekyuli: C21H28O2
Ubunzima Ezinto: 312.45
Eyona ndlela iphambili yokusebenza kwe-Levonorgestrel powder eluhlaza njengepilisi ye-progestogen-kuphela yonyango lokuthintela ukukhulelwa, ngokwe-International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), ukuthintela ukuchumisa ngokuthintela i-ovulation kunye nokuqina kwencindi yomlomo wesibeleko. Ukuphononongwa kobungqina kuphakamisa ukuba i-LNG [levonorgestreol] ECPs ayinakuthintela ukumiliselwa kweqanda elichunyisiweyo. Ulwimi kumiliselo akufuneki lubandakanywe kwiileyibhile zemveliso ye-LNG ECP. ” Ngo-Novemba ngo-2013, i-Arhente yamaYeza yaseYurophu (i-EMA) yavuma utshintsho kwilebula isithi ayinako ukuthintela ukumiliselwa kweqanda elichunyisiweyo. Olunye uphononongo lisafumanisa ukuba ubungqina abukacaci. Ngelixa kungenakulindeleka ukuba ukuthintela inzala ngexesha likaxakeka kuchaphazele ukufakelwa akunakwenzeka ukuba ikhuphe ngokupheleleyo ukubakho kwesiphumo sasemva kokuchumisa. Ngo-Novemba ka-2013, i-EMA ikwavume ukutshintshwa kwelebheli ye-HRA Pharma's NorLevo isithi: “Kwizilingo zeklinikhi, ukusebenza ngokuthintela ukukhulelwa kuncitshisiwe kwabasetyhini abanobunzima obuyi-75 kg [i-165 yeepawundi] okanye nangaphezulu, kwaye i-Levonorgestrel powder yayingasebenzi kubantu basetyhini abanobunzima ngaphezulu kwe-80 kg. ”Ngo-Novemba ka-2013 nango-Janyuwari ka-2014, i-FDA kunye ne-EMA bathi bajonga ukuba ubunzima obonyukayo kunye nesalathiso sobunzima bomzimba (BMI) kunciphisa ukusebenza kweendlela zokuthintela ukungxamiseka.
I-Levonorgestrel ipowder eluhlaza iyafana nawo onke amayeza, ezinye iziphumo ezingafunekiyo zinokubakho ekusebenziseni i-Levonorgestrel powder. Njalo qhagamshelana nodokotela okanye oqeqeshiweyo wezempilo ngaphambi kokusebenzisa. Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo zokuthatha i-1.5 mg ye-Levonorgestrel powder eluhlaza kwizilingo zeklinikhi (ezichazwe yi-10% okanye ngaphezulu) zibandakanya: ukugabha, imihlathi, isiyezi, intloko ebuhlungu, isicaphucaphu, ukudakumba, amabala, ukuzuza ubunzima, ukwehlisa i-HDL, iintlungu zesisu, ukudumba kwebele emva kokukhonza, iintlungu zesibeleko,, ukulibaziseka kokuya exesheni, ukuya exesheni okunzima, ukopha kwesibeleko, kunye nokudinwa, amenorrhea. Ukungasebenzi kwesibindi kunye nezintso, ubunzima bebele baxhonywa .; iziphumo ebezingalindelekanga eziqhelekileyo (ezixelwe nge-1% ukuya kwi-10%) zibandakanya urhudo, ukugabha kunye nokuya esikhathini okubuhlungu; ezi ziphumo bezingalindelekanga zihlala zinyamalale ngaphakathi kweeyure ezingama-48, azinakho njengeepilisi zolawulo lokuzalwa eziqhelekileyo, ekufuneka zithathwe ngamanyathelo okuthintela ukukhulelwa amayeza alandelayo. Abasetyhini abatshayayo akufuneki bathathe (ngenxa yobunzima besifo sentliziyo).